“Irradibaa Siyaasaa” Agartuu Qeerroo Tibbanaa – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo“Irradibaa Siyaasaa” Agartuu Qeerroo Tibbanaa
Qalbeessaa Dhangi’aatiin , Gurraandhala 15, 2018
Meeshaawwan halagaan qabsoo Oromoo ittiin cabsuuf gargaaramu keessa tokko Irradiba. Irra diba keessatti wantoota hedduutu bukoodha, muraasatu bilchaataa fakkaata. Irra diba jechuun, keessatti utuu hintaane buddeen irraan dhadhaa dibamudha. Irradibaan keessisaa dhadhaa hinqabu. Sabababan nii dibame males waliin hinbilchaanne.
Qabsoo keessattis garboonfataan irra diba nii fayyadama. Irradiba kanaan uummata burjaajessuu, ko’omsuu, gowwomsuu danda’a. Amma Oromiyaa keessa irradibatu hojjetaa jira. TPLF meeshaa Irradibaaf oolu kana haalan mijeessitee bobbaafteetti. Akka agartuu Qeerroo tibbanaatti wantoota qabsoo naaffisuuf halagaan xaxaa jiru keessaa tokko Irradiba. Irradiba haalaan lafa qabachiisuun of miidhuudha. Dafanii hongeessuun qabxii Bilisummaatti nu geessu fuulduraa dalaguuf nu qarqaara.
Irradiba haala dhiyeessisaaf, haala hojiisaarratti hundoofnee qoqqoduu dandeenya. Isaanis
Irradiba Suutaa fi Irradiba Furguggataadha
1. Irradiba Suutaa
Caasaa irra dibaa keessaa isa olaanaaf balaa guddaa uummata cunqurfamaaf fidudha. Irradiba Suutaa akkuma maqaasaa ariifataa miti, suuta uummata keessa qaxxisa. Irradiba uummata fakkaatee uummata nyaatudha. Qaamonni balballoomsan qaamota Bilisummaa uummataa jibbanidha. Irradiba kana keessa caasaawwan xixiqqoo Hanna Qabsoo, Burjaajjii Qabsoo, Saamicha Qabsaa’otaatu mul’ata. Hanna qabsoo kanaan waggaa dheeraa uummata Oromoo irratti habashoonni taphataniiru.
Irradiba irraan gaarii fakkaatee keessaa qoraattii qabu, kun Qoraattii Qabsoo naaffisu kan qabudha. Ilkee Qoraattii busheessuuf Ijaarsa jabaan itti deemuu barbaada. Ishee suutaa kana injifachuun akkanni jalqabetti duukaa jalqabuudha. Kanarratti Qeerroo Bilisummaa Oromoo waan guddaanni dalage, Irra diba suutaa maqaa “Qonna gara industirii, Guddina magaalaa Finfinnee, Misooma…” Jechoota jedhuun kana TPLF fayyadamuuf turte mara irra aanuu danda’e. Gama Irra diba suutaa, kana Irra ejjetuu danda’eera.
Irra diba suutaa kana Irra aanuu keessatti qooda jabaa fudhachuun of wareeguun ajandaa halagaa suutaa uummata buqqaasuuf jedhu fashalsee jira. Duuchaatti Irra diba suutaa kun siyyaasa keessatti Irra keessoon kuulamtee dhufti, irra keessa kan cululuqxuuf irra keessa bareedduu keessan icciita saamichaa, icciita daguuggaa sanyii, icciita godaansa qabeenyaaf qe’ee ofii qabatee dhufudha.
2. Irra Diba Furguggataa
Caasaa Irra dibaa muddamsaan bocamtudha. Caasaan kun gosoota irra dibaa keessaa kanneen haala muddamaa, yeroo gabaabduu keessatti garboonfataa mudatan furuuf kan dhuftudha. Irra Diba Furguggataa kana gaafa bocamee halagaarraa bobbaafamu, mirqaansaaf, birqaansuun kan uummata gowwomsudha.
Yeroo hedduu Irra Diba Furguggataa keessatti Garbbummaatu Bilisummaa fakkaatee nama hollachiisa, nama fiigsisee kaachisa. Kana keessatti qaacummattoota qabsoo haqaan qabantu secca’ee beeka. Habukkaakkummaa Irra Diba Furguggataa kana kan irra aanu namoota ija siyyaasaa fagootti argu qabanidha. Gaafa halagaan ajandaa tokko fudhatee miidiyaatti baahu
Maaliif kana jedhaa jiru? Karaan isaan dhufaa jiran eessaan nu miidhaa? Akkamitti haala kana keessatti kana dubbatan? Gaaffilee jedhan of gaafachuu feesisa.
Irra Diba Furguggataa Torban kanaa keessaa agartuun Qeerroo arge. Kan gidduu kanaa mormiin gaafa jabaatu “Hidhamaa Siyyaasaa baasna!” jedhan. Muddamanii garatti deebi’an dhabanii muddama keessatti murteessan. Hidhamtoota hedduu baasuu baatan kanneen mana hiraarsaa jiran muraasa baasaniiru. Kun Irra Diba Furguggataadha. Sababaan nama muraasa yoo baafne uummanni kun nurraa afaansaa cufama jedhee waan yaadeefi. Kanaaf ammoo namoota hawwaasi ‘target” beeku qofa baasuu kan jedhutti fuulleffatan. Kanaan ala nama hawwaasi hedduun hinbeekne, kanneen shora olaanoo riphanii uummataaf gumaachaa turan ammoo akkuma Budummaasaaniitti mana dukkanaatti lafeef dhiiga isaanii dhangalaasanii nyaachuu murteeffatan.
Hidhamtoota Siyyaasaa Oromoo kitila keessaa muraasa baasan, Akaafan hammaaranii Konyeen nutti qicuu abbalan. Sun Marti ammas akka yaadan ta’uu dide. Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummatasaaf falmatu ammas gadjabeessee falmii hadhaawaa taasise. Burjaajjii uumuuf FXG hinfeesisu gabaa lagadhaa qofaan bira darbamuu kan male, gara FXG hiriiraan sagalee dhageessifachuutti kute. Qabsootuu qabsaa’ota haqaa barbaaduudha, kanneen kufan lafeesaanii ekeraasaanii boqochiisuudhaaf kan akeekkatedha. Qabsootu kaayyoo Wareegamtootaa, sababaa wareegamni kaffalameef sana bira kan gahuuf kan bobbaa’amedha. Qabsoo Abbaa Biyyummaa uummataa mirkaneessuuf kaatedha. Kanaaf hanga guyyaa har’aatti Qeerroon ABO fi WBO faarfataa, diina kokkee qabuuf gidirsuu kunaanuu jalaa bahuuf sagalee mormii dhageessifachuu, mootumaa ce’umsaa gaafachuu itti fufe.
Ammas Irra diba Furguggataa qabatanii uummatatti bahutu barbaachise. Har’ammoo maqaa aangoo gad lakkiseera jedhuun prime minister irraa hobonboleettii siyyaasaan bubbifamte. Dubbiin kun shira akka duubaa qabu shakkaa deemuu wayya. Waan halagaan godhu martuu nu hinfayyadu, nu mirqaansuu nu gammachiisuu hinqabu. Gaaffii nutti uumuu danda’uu qaba. Namtichi kaleessas Biyya gaggeessaa hinturre, har’as gaggeessummaan wayyaanee badeera jechuu hindandeenye. Bilisoomneerra jechuu hindandeenye. Utuu bilisoomnee alaabaa keenyaan alaabaa Shororkeessaa jedhamee dargaggoonni hinqabaman, hin jibbaman ka.
Kanaaf Irra Dibaawwaan kana akkuma nutti lallabameetti dhiichisuu, sirbuu qofaan nu miidha. Sababaan jarri waan karoorfatte qabaachuu qabdi. Amma Lammaa, Dr. Abiyyii Warqinaa gabayyoo filatanii dhiisanii waan nu ilaallatuuf qabsoo keenya keessa jirus miti. Qabsoon keenya, OPDO prime minister taasisuu utuu hintaane, Uummataaf abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudha. Kanaaf ilaallataa haa kaanu, ilaallataa haa teenyu!. Ilaallataa haa fiignu! Kanaaf of eeggannoo barbaada
Gurraandhala 15, 2018
Agartuu Qeerroo Tibbanaa (Waldarba) Qalbeessaa Dhangi'aatiin, Bitootessa 7, 2021 Torban kana ayyaana Aduwaa jechuun qaamoleen…
Qeerroo (the Oromo people) won the battle but not the war yet!